Ama-Amazon anokubeka njani ama-checkers abachaphazelekayo ekuncediseni umkhankaso wokwenza ngcono?
I-Amazon yimpumelelo eqhubekayo yokuhweba apho ngamnye umthengisi angakwazi ukuphakamisa imali kwaye akhuthaze uphawu lwalo. Ibonelela ngeenzuzo ezininzi kwi-e-yorhwebo ishishini elibanika inzuzo enkulu kunye nabathengi abaqhelekileyo. Wonke umntu unokuhlakulela ishishini lakhe kwi-Amazon njengoko kuthatha ixesha elifutshane kunye neenzame. Nangona kunjalo, yintoni isizathu sokuba khona kwi-Amazon njengoko abathengi bakho abanakho ukufumana iimveliso zakho? Njengoko i-Amazon yindawo ekhuphisana kakhulu, kufuneka usebenze kanzima phantsi kokubeka uluhlu lwakho nokuphuhlisa umkhankaso wokuthengisa. Ukulandelela impumelelo yokuphuculwa kwakho kunye nemikhankaso yokuthengisa, kufuneka uhlolisise izikhundla zesikhundla sakho semveliso ngokuqhubekayo. Ukuba uthengisa iimveliso ezingaphezu kwemihlanu, kuya kuba nzima ukulandelela zonke izikhundla zabo ngesandla. Yingakho kweli nqaku siza kuxoxa nge-Amazon usetyenziso lokujonga i-checker engakwazi ukunikela ngokunyanisekileyo imizamo yakho ye-Amazon. Kodwa makhe siqale siqwalasele ukuba kutheni kubaluleke kakhulu ukulandelela i-product rank in Amazon.
Kutheni ufuna ukulandelela ixabiso lakho lemveliso kwi-Amazon?
Xa unokwazi ukubona ukuba yeyiphi igama elijoliswe kuyo kunye nendlela iimveliso zakho ezenza ngayo kwikhasi lekhasi lekhasi le-Amazon, uya kukwazi ukuphucula ukulungiswa kohlu lwakho nokulungisa iziphoso ezikhoyo. Kufuneka ufeze iimvavanyo zokuhlukana kwaye unikezele abaphandi begama elingundoqo ukuba bafumane imigaqo yokukhangela kunye nejoliswe ekujoliswe kuyo. Imigqaliselo ekhethekileyo kunye nexesha elide lokukhangela inomnqophiso ophezulu kunabanye kwaye inokusebenza njengezixhobo zokubeka amanqaku kumashishini amancinci okanye atshanje. Nangona kunjalo, kubalulekile ukukhankanya ukuba amagama aphangaleleyo atshabalalisa ithrafikhi engaphezulu kunegama lokukhangela elincinci.
Kunengqiqo ukukulandelelana kwimihla ngemihla, ngeveki, okanye ngenyanga. Ukwenza uphando rhoqo, uya kufuna enye iprogram e-intanethi efana ne-Splitly okanye i-AMZInsight. Ezi Amazon zinamanqaku okubeka ingqwalasela zingenza zonke iinkonzo zokuhlalutya kunye nophando kuwe kwimvelaphi yeemveliso zelayibhile yangasese..
Abanye abathengisi be-intanethi baxhalabisayo xa bebona ukunyuka kwamanani kwii-statistical numbers. Nangona kunjalo, akukho sizathu sokukhathazeka malunga. Kuqhelekileyo kwimveliso esanda kutsalwa. Ngaphezu koko, ukuhlukahluka kuxhomekeke kwinqanaba lokuncintisana kwintengiso yemveliso, ukunyuswa kwemveliso, ixesha lonyaka kunye nezinye izinto. Ngethamsanqa, ngokusebenzisa isofthiwe ye-software esekweni, uya kufumana ingcamango yendawo ephakathi kwemveliso yakho ngokuhamba kwesikhathi. Inzuzo ebalaseleyo onokuyifumana kwisofthiwe ye-intanethi ye-intanethi kukuba uya kubhiyozela xa izikhundla zakho zesikhundla semveliso zanda kwaye ziqhubeka zisebenza nzima xa zizinzile. Ukongezelela, unokwenza usebenze xa i-rank yakho ihla.
Ngoko ke, kubalulekile ukufumana i-keyword yokulandelela ngokuzenzekelayo ngokulandelelana, ngoko unokukufumanisa amanqaku aqinileyo kunye nebuthathaka kwiphankaso yakho yokulungiselela kunye nokuchonga indlela obeka ngayo ezi zinto okanye amagama okukhangela.
Nangona kunjalo, ireyithi yakho yeemveliso ayikho enye iteksi enentsingiselo oyidingayo ukuba ulandele rhoqo, kodwa kukho nezinye izinto ezibalulekileyo ezifana nokuthengiswa kwethamo, izithuthi kunye neeseshoni, ukuphononongwa kunye nokunye. Zonke ezi methriki onokuzifumana usebenzisa i-Amazon apha ngasentla zaphanda izixhobo. Njengomthengisi onobugcisa obuthile, kufuneka ugcine umbono jikelele kuwo onke amanqanaba aphezulu anokuchaphazela ngandlela-thile iimveliso zakho kwi-Amazon SERP.
Izixhobo zophando lwe-intanethi endandisebenzisileyo zinikezele ngeengxelo eziqhelekileyo. Kukulungeleka xa unemifanekiso yonke yesimo sakho samanje kwaye unokuqhathanisa izikhundla zangaphambili nezikhoyo.
Ngoko ke, ndingatsho ukuba i-Amazon usetyenzise ukujonga i-checkers ingakwazi ukulondoloza ixesha lakho kwaye ikunikezele ngeenkcukacha ezichanekileyo ezichanekileyo ezifunekayo ukuqhuba kakuhle kwi-Amazon.